बैंक लुट्ने क्रममा झ’डप, २५ जनाको मृत्यु – Ramailo Sandesh
बैंक लुट्ने क्रममा झ’डप, २५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं। कम्तीमा २५ जना बैंक लु’टेरा’लाई गो’ली हा’नी मा’रि’एको छ। आइतबार प्रहरी र लुटेराबीच भएको छुट्टाछुट्टै झडपमा परि कम्तीमा २५ जना लुटेरा मा’रिएका हुन्।
माइनस गेरेइस प्रान्तको भर्गिन्हा शहरमा लुटेराहरुको समुह आइतबार बैंक लुट्न गएको बेलो झ’डप भएको प्रहरीले जनाएको छ।
ठुलो संख्यामा खटिएको ब्राजिल प्रहरीले पहिलो झडपमा १८ लुटेरा र दोस्रो झडपमा कम्तीमा ७ लुटेरा मारिएको प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता लायला ब्रुन्नेलाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग बताएकी छन्।
आरोपितहरूलाई रियो द जेनेरियो सहरबाट करिब ३४५ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्ने भर्जिनहा सहरका दुई फार्महाउसमा मा’रिएको स्थानीय पत्रिका ओ टेम्पोलाई उदृत गर्दै द गार्जिएनले जनाएको छ। सो मिसनमा सहभागी संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रहरीले आरोपितहरूसँग विष्फोटक पदार्थ, बुलेटप्रुफ भेस्ट तथा ५०–क्यालिबर मेसिन गनजस्ता अत्याधुनिक हतियार रहेको बताएको छ।
उनीहरूबाट राइफल, ग्रिनेड तथा चोरीका गाडीहरू बरामद गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्ता समूहले बैंक लु’टेपछि प्रहरीबाट बच्नका लागि चोरी गरेका गाडीहरूमा आ’गज’नी गरेर सडक अवरुद्ध गर्ने गरेको पनि प्रहरीले बताएको छ।
ब्राजिलमा गत अगस्ट तथा सन् २०२० को डिसेम्बरमा पनि ह’ति’या’रधा’री समूहले बैंकमा आ’क्र’मण गरेका थिए। प्रहरीले आइतबार मा’रिएका आरोपितहरूले स्थानीय बैंकहरू लुट्ने भावी योजना बनाइरहेको बताएको छ। मारिएका आरोपितहरूको पहिचान भने खुलाइएको छैन।
उनीहरू विगतमा बैंक लुट्ने समूह हुन सक्ने पनि प्रहरीले बताएको छ। ब्राजिलमा विशेष योजना बनाएर अत्याधुनिक ह’ति’या’रसहित बैंक लुट्ने घटना बढ्दो छ।
सुत्दा किन ब्रा खोलेर सुत्ने ? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने